Izinkantolo ziyalubhekisisa udaba lwemibhikisho eba nodlame - Bayede News
Isithombe: nguMlungisi Louw
Ziningi izigameko zodlame emphakathini ezibikwayo nezibonakala nsukuzaphuma eNingizimu Afrika lapho amalungu omphakathi esuke ebhikisha kukhona akhala ngakho.
Kwesinye isikhathi kuba yizisebenzi zezinkampani ezithile, ezikamasipala noma zikaHulumeni ezisuke ziveza ukungenami kwazo ngezinto ezithile ezithinta zona ngqo.
Kanjalo nasezikhungweni zemfundo ephakeme lokhu kuye kubonakale njalo uma kuqala unyaka lapho abafundi phakathi kokunye basuke bekhala ngezindawo zokuhlala nokuthola izikhala zokufunda. Kuze kwenye inkathi kubhikishelwe ngisho ukudla imbala.
Isibonelo salokhu yisigameko sokushiswa kwendlu yonogada nemoto esikhungweni semfundo ephakeme i-University of KwaZulu-Natal (UKZN) ekuqaleni konyaka ngesikhathi abafundi bebhikishela ukuba kusulwe izikweletu zemali yokufunda zakudala. Kwaboshwa abafundi babekwa icala lokudala udlame emphakathini nokucekela phansi impahla ngomlilo esiteshini samaphoyisa eWestville, eThekwini.
Ngendlela lokhu okwenzeka ngayo sekuze kwakheka isithombe sokuthi abenzi kwakho ngaboHlanga kwazise imibhikisho eminingi eba nodlame yenzeka ezindaweni zakobantu.
Nakuba kuba khona ababoshwayo ngodlame emphakathini kepha lezi zenzo azinqandeki futhi kubukeka bebaningi abakhohlwayo noma abangazi ukuthi ukwenza lokhu kuyicala elibomvu elingaphelela ezinkantolo futhi kunezijeziso zakho.
Isigameko sakamuva sokudala udlame emphakathini yileso sabalimi abamhlophe baseSenekal, esifundazweni iFree State, abacekele phansi impahla baze bashisa iveni yamaphoyisa. Iqeqebana labamhlophe belisenkantolo yendawo lifuna ukuthi abasolwa ngokubulala iMeneja yepulazi, uBrendin Horner, banikelwe kubona. Umsolwa wokuqala uMnu u-Andre Pienaar nomunye wesibili baboshwa babekwa icala lokuzama ukubulala, ukudala udlame emphakathini, ukushisa nokulimaza impahla. Icala lalaba liyaqhubeka eNkantolo kaMantshi eSenekal.
Ubani ongakhohlwa uMcebo Dlamini ongomunye wababehola umkhankaso iFees Must Fall kulwelwa imfundo yamahhala ezikhungweni zemfundo ephakeme.
UDlamini waboshwa walivuma icala lokudala udlame emphakathini ngesikhathi semibhikisho ye#FeesMustFall. Lesi sishoshovu sagwetshwa iminyaka emibili nezinyanga eziyisithumba kodwa lesi sigwebo salengiswa iminyaka emihlanu.
Mhla ziyisi-7 kuNtulikazi nonyaka iNkantolo Yesifunda eThekwini igwebe abesilisa abayisi-8 ngecala lodlame emphakathini. Inkantolo ibahlawulise izi-R8 000 umuntu ngamunye noma izinyanga eziyisi-8 ejele emveni kokuba izwe ukuthi bakuvimba kanjani ukuhamba kwezimoto nokudala udlame emphakathini emgwaqeni uSydney, eThekwini, ngesikhathi benombhikiso mhla zingama-25 kuNdasa wezi-2019 lapho kwakuvinjwa amaloli ukuba angangeni eBayhead khona eThekwini.
Ngowezi-2018 owesilisa waseVuwani eLimpopo owayeneminyaka yobudala eli-19 wagwetshwa iNkantolo Yesifunda eVuwani iminyaka eyisi-9 ejele ngaphandle kokukhethiswa phakathi kwejele nenhlawulo, emva kokulahlwa yicala lokudala udlame emphakathini ngesikhathi le ndawo igubuzelwe yimibhikisho yezidingo zomphakathi ngowezi-2017.
Ngesikhathi sale mibhikisho izimoto okubalwa ezamaphoyisa neyakwaSABC zashaywa ngamatshe zalinyazwa. Kwaphinde kwalinyazwa nezindlu zangasese ezingomahamba nendlwana.
Kwesinye isinqumo senkantolo ecaleni lokudala udlame emphakathini, ngowezi-2013 Inkantolo Yesifunda eRichards Bay yagweba amalungu eSouth African Municipal Workers Union (Samwu) ayeyizisebenzi zikaMasipala uMhlathuze izinyanga eziyisithupha ejele noma inhlawulo yezi-R2000 umuntu ngamunye. Kepha umholi wale nyunyana uPamela Makhoba wagixabezwa ngenhlawulo yezi-R4000. Lokhu kulandela ukuthi laba bacekela phansi impahla kaMasipala nemoto yamaphoyisa ngesikhathi benesiteleka mhla zingama-23 kuNcwaba wezi-2011. Ingxenye yesigwebo sabo yalengiswa iminyaka emihlanu ngaphansi kombandela wokuthi bangatholakali benecala elifanayo.
Izindawo zokungcebeleka nomthetho wokuvikela izihambeli
Ngesikhathi ikhipha isigwebo iMantshi uLogan Naidoo yathi nakuba ukubhikisha, ukuteleka nokubhikisha ngokuveza izingqwembe ezibhaliwe kuyilungelo elikuMthethosisekelo wezwe, akufanele lisetshenziswe kabi.
“Imbangela enkulu yobugebengu ukungahloniphi umthetho nokulawulwa futhi akekho noyedwa ongeke abhekana nomthetho. Uma singawusebenzisi umthetho sizofaka izwe obishini,” yasho kanje iMantshi uNaidoo ikhipha isigwebo.
Yaqhuba yathi ngenhloso yokunqanda ukuba izigameko ezifuze lezi zenzeke, laba ababebekwe amacala kufanele bakuqonde ukuthi behluleka ukuhlonipha umthetho nokulawulwa.
“Abantu kufanele bafunde emaphutheni abo kanjalo nesijeziso kumele sibavimbe ukuba bangaphinde benze icala elifanayo. Muva nje uma imibhikisho isiphenduka udlame futhi kusetshenziswa izikhali, kukhomba ukungahlonishwa komthetho. Abantu kufanele bahloniphane,” kusho iMantshi.
Yaqhuba yathi: “Lapha sinabantu okufanele engabe bazi kangcono, ukuziphatha kwabo ngale ndlela kuyethusa.”
Izigwebo ezibalulwe ngenhla ziyakucacisa ukuthi icala lokudala udlame emphakathini nalo izinkantolo lizathatha njengamanye ikakhulukazi lapho kulinyazwe khona impahla.
nguSabelo Mbatha Oct 23, 2020